ICC consider two-tier system - Telegraph
The proposals – that Bangladesh and Zimbabwe, the two weakest Test-playing nations, should play less cricket and mostly at home – are likely to be agreed when the ICC's executive board meet in Delhi next month.
Since then the abysmal performances of Bangladesh and the crisis in Zimbabwe has exposed the problems of the system. Bangladesh have only just, after 31 defeats in 34 games – many of them embarrassing – won their first Test.
Bangladesh finally win in 35th Test
The ICC programme was responsible for the biggest recent crisis in English cricket, forcing England to tour Zimbabwe to avoid breach of contract and heavy penalties. The new plan is that the eight major countries, barring Bangladesh and Zimbabwe, will play each other twice – once at home, once away – every four years. Bangladesh and Zimbabwe will have a longer time span, as much as six years, to play the other countries.